Ungayisebenzisa Kanjani futhi Uyikhuthaze I-infographics | Martech Zone
Ungayisebenzisa Kanjani futhi Uyikhuthaze I-infographics
NgeSonto, Novemba 13, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-infographics yokumaketha kube ngumthombo wokunakwa okukhulu kweMartech. Kangangokuthi sengisethe Izaziso ze-Google kwethemu infographic futhi ngiyazibuyekeza usuku lonke. Njengoba i-infographics idume kakhulu, imboni yokuqukethwe ikhungathekile infographics ezimbi… Ngakho-ke sithanda ukukhetha ukuthi yini esabelana ngayo noma esingabelani ngayo ukuqinisekisa ukuthi sihlala sinikeza inani.
Izizathu eziyi-10 infographics kufanele zibe yingxenye yecebo lakho lokumaketha okuqukethwe.
Kungani ama-infographics enza amathuluzi amahle wokumaketha?
Ungayicwaninga kanjani futhi uyiklame kanjani i-infographic?
Ukukhetha amafonti afanele nemibala ye-infographic yakho
Yini eyenza i-infographic enhle?
Ama-infographics angabiza ukuwakha nokuklama, imvamisa kubiza ngaphezulu kwama- $ 2,500 lilinye! Ungayeki ukufunda lokhu okwamanje, noma kunjalo! Awudingi ukuklama i-infographics ukuze uwasebenzise ngokunenzuzo. Ama-infographics aklanyelwe ngqo ukuthi abiwe… ngakho ukuthola ama-infographics amahle nokuwafaka kusayithi lakho kuseyiqhinga elihle. Ngaphandle kwezexwayiso zeGoogle, kukhona namanye amasayithi amahle aqoqa ama-infographics. Ungazama nokuzithumela okwakho lapho… eziningi zikuvumela ukuthi ungeze i-akhawunti!
Thola i-Infographics Online
I-Alltop Top Infographics - i-aggregator yezinsizakusebenza eziphezulu ze-Infographic.
Imininingwane ye-B2B - ama-infographics amahle ku-B2B Marketing.
Ikholomu yesihlanu - inkampani emangalisayo yokwakhiwa kwe-infographic.
I-infographics epholile - ibhulogi enikezelwe ukwabelana nge-infographics epholile.
I-infographic yansuku zonke - isiza esivela ku-Infographic World, umakhi we-infographics.
Igrafu.net - enye indawo yokwabelana nge-infographics.
I-infographics yothando - iqembu elincane labakhangisi be-inthanethi abahlangane ngenhloso yokwakha isisetshenziswa se-infographics.
Uhlu lwe-infographic - ibhulogi enikezelwe ukwabelana nge-infographics.
Umbukiso We-infographics - Ukuqoqwa kwe-infographics ehamba phambili nokubukwa kwedatha kuwebhu!
Ukuqondisisa kahle - iqoqo le-infographics eyenzelwe amaklayenti weNowsourcing.
Thumela i-infographics - nguKiller Infographics.
Visual.ly - isiza esihle sokuthola nokwabelana nge-infographics.
I-Visual Loop - Ukusakazwa okungapheli kweZixhumanisi eziya ku-Infographics, Amamephu, amashadi namanye ama-Designs Designs amaningi enza inqubo yokuqonda impilo yethu ibe lula… noma cha.
IVoltier Creative - enye inkampani enhle yokwakhiwa kwe-infographic.
Nayi i-athikili mayelana Izinsiza eziyi-100 eziningi ze-infographic online!
Ungayithatha Kanjani I-infographic
Lapho usuthole i-infographic oyithandayo, kuthiwani-ke?
Faka okuqukethwe okubhaliwe ngemicabango eyisihluthulelo nge-infographic, okuthandayo ngayo, nokuthi kungani unqume ukuyaba nezithameli zakho. Izinjini zokusesha azikwazi ukufunda amagama ku-infographic, kepha zingafunda amagama ahambisana nayo kusayithi lakho. Bhala okuqukethwe okuhle okuphoqelela okuzokwenza isayithi lakho litholakale… noma ngabe akuyona i-infographic yakho!
Kopisha noma Shumeka? Imvamisa, ama-infographics athunyelwa kanye nekhodi ukushumeka i-infographic bese wabelana ngayo kusayithi lakho (ngokujwayelekile ngesixhumanisi esinegama elingukhiye elibuyela emthonjeni). KuMartech, ngokujwayelekile silayisha i-infographic yangempela kuseva yethu ngoba sinomphathi osheshayo nenethiwekhi enkulu yokulethwa kokuqukethwe (inikwa amandla yi I-StackPath CDN. Ama-infographics ngamafayela amakhulu… ngakho-ke uma ungeke uwasebenzise ngokushesha kusayithi lakho, bese usebenzisa ikhodi abayifakile!
Thuthukisa i-Infographic! Akwanele ukumane uthumele i-infographic bese unethemba lokuthi othile uzokuthola. Ngokushesha nje lapho uthumela i-infographic yakho, yithuthukise yonke indawo! I-LinkedIn, iStumbleUpon, i-Twitter, i-Facebook, i-Digg, i-Reddit, i-Google +… noma kuphi nanoma ikuphi lapho ungathola khona igama, kwenze. Bhala ukubuyekeza okuphoqelela noma izincazelo bese usebenzisa amathegi okuyimigomo abantu abazoyifuna lapho befuna imininingwane.
Uma wabelana nge- i-infographic yakho, yihambise kumasayithi afana Visual.ly ukuthola okungeziwe. Ngokwengeziwe, faka i- isitatimende sephephandaba phuma kuso. Ukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindaba kwamazwe omhlaba kungaqhuba izinkulungwane zamaRandi kepha kube yimpumelelo ekutholeni ukuthi ama-infographics abo asatshalaliswa umhlaba wonke ngamasayithi anegunya eliphezulu kakhulu.
Sebenzisa ama-infographics ukushayela ithrafikhi eningi kakhulu nokunaka isayithi lakho noma ibhulogi. Kuyisu elisebenzayo!
Tags: thenga i-infographicsdesign infographicsukusabalalisa i-infographicsthola infographicsukukhushulwa kwe-infographicamasu we-infographicimithombo ye-infographicssungula i-infographicskhuthaza i-infographicsizizathu ze-infographics
Faka izilungiselelo zomphakathi ku-WordPress Theme yakho
Feb 9, 2012 ngo-8: 33 AM
UDouglas, ngisanda kuthola i-infographics muva nje (ikakhulukazi evela ePininterest) futhi ngiyazazisa kakhulu izincazelo zakho nezinsizakusebenza zakho. Ngokufudumele, uSusan
Feb 9, 2012 ngo-11: 28 AM
Ngiyabonga kakhulu @ social_lady1: disqus!
Feb 26, 2012 ngo-8: 52 AM
Sawubona, Douglas, okuthunyelwe okuhle, ngifuna ukwengeza iziphakamiso ezimbalwa zabafundi bakho. Okokuqala, i-AllTop ye-Infographics (http://infographics.alltop.com/), lapho uzothola khona amabhulogi aphezulu namasayithi mayelana nalesi sihloko. Futhi eyethu i-Visual Loop (http://visualoop.tumblr.com/), ivala manje ku-20.000 (!) I-infographics evela kuwo wonke umhlaba.
Qhubeka nomsebenzi omkhulu!
Feb 26, 2012 ngo-5: 49 PM
Kwazise, ​​kungezwe nje!
@ NigelMF1: disqus Ngiyabonga! Ngingeze lokho ohlwini!
Sep 16, 2015 ngo-1: 02 PM
Uhlu olukhulu mate! Enye yezintandokazi zami yi-Alltop, ye-infographics nayo kepha cishe yonke into! I-Alltop ngokoqobo inekhasi lakho konke!